च्याठिएर रुदैँ उ यो संसारमा आई। जन्मिदै गोरि। उस्ले गर्दा उस्का बा-आमा बधाईका पात्र बने। चारैतिर बाट उस्को बा-आमालाई अनि परिवारलाई बधाई थाप्न भ्याई-नभ्याई हुँदै थियो। उ यो संसारमा ढिलो आएकी थि,अर्थात उस्को बा-आमाको बिहे भएको १० बर्षपछी। सारा गाउँ,शहर,समाज अनि छिमेकीहरुले बिहे भएको यत्रो बर्षसम्म पनि बच्चा भएन भनेर हेयको दृष्टिले हेर्ने गर्थे उस्को बा-आमालाई। आज तेस्को अन्तय भयो उ जन्मनासाथा।”अर्को बिहे गर्नु” भनेर सम्म भने त्यो समाजले उस्को बा अनि घरपरिवारलाई जस्ले आज उ आउनासाथै सबैभन्दा पहिला बधाई टक्राएका थिए।
“बधाई छ,तपाईको घरमा साक्षात लक्ष्मि आईन” अहिले यो समाजले उस्को घरपरिवारलाई भन्ने एक मात्र वाक्य । समय बढ्दै गयो। उ सानी बाट ठुली हुँदै गई। हेर्दै गुडिया जस्ती देखिन्थी। उस्का तेजिला दुई मिनाक्षी नयन। धपक्कै बलेको अनुहार। गोरो रुपरंग। सलक्क परेका हातका औंलाहरु। उ जब ६ बर्षकी भई, उस्ले खेल्ने गरेका भाडाकुटिहरु अब अर्कैले खेल्न आयो,अर्थात उस्को भाई पनि आयो यो संसारमा ।
“कस्ति लक्षिणकी तपाईकी छोरी त” सपैले यस्तै भन्नथाले उस्को परिवारमा नयाँ सदस्य थपिनासाथै, छिमेकीको मुखबाट यति सुन्नासाथ उस्का बा-आमा गमक्क पर्थे। समय बित्दै गयो।
उस्को भाई २ बर्ष अनि उ ८ बर्षकी हुँदा उनिहरुका आमाले यो संसारबाट बिदा लिईन्।
उनिहरुको परिवार त्यस घटनाले गर्दा हेटौंडाबाट बसाई सरेर सिमरा आए। नयाँ सहर,नयाँ ठाउँ ,नयाँ घर अनि नयाँ छिमेकी। बिस्तारै-बिस्तारै उनिहरु सिमरेली जीवनशैलीमा समेत भिज्दै गए। “तपाईकी छोरी त कति राम्री? त्यस वरपरकाले समेत यसरी तारिफ गर्न थाले। उ राम्री थि।उ सन्तोषी थि। उ जिद्दी केही कुरामा गर्दिनथी। उ कसै संग रिसाउदिन थि। उस्मा घमण्ड भन्ने कुन चरिको नाम हो त्यो समेत थाहा थिएन।
अब उ सानी रहिन। ठुली भई । १० पढ्ने भई ! स्कुलभरी उसैको चर्चा अनि परिचर्चा। उस्को रुपको चर्चा। उस्को सु-बानी,सुसंस्कारको चर्चा ! उस्को तेजस्वी दिमाखको चर्चा ! स्कुलले समेत उस्लाई आफ्नो गहना ठान्थ्यो।
बिस्तारै अब यो समाजका पुरुषहरु को आँखाको नानी बन्न थाली उस्को फक्रेको यौवनलाई देखेर उ हिंड्ने गल्लि्, बाटो,कुना, अनि उस्को घरवरपर फोहोरी नजरहरुले उस्लाई ढुकेर बस्न थाले। अब उस्लाई आफ्नो सुन्दरता भारी पर्न थाल्यो। उस्लाई आफ्नो त्यो सुन्दरता आफैँलाई अभिशाप लाग्न थाल्यो।
मिलेको लचकदार अनि छिनेको अनि केही उठेको कम्मर। लामा-लामा सुनकेशरी केश जुन हावामा धानका बाला झै झुल्दथे। ती ठुला-ठुला मिनाक्षी गाजलु नयन। मिलेको शारीरिक उचाई । आकर्षक तरिकाले कस्सिएको उस्का दुई ती पुटुस्स परेका गोलाकार बृक्ष्यस्थल, अर्थात “उस्का ती दुई स्तन”
उस्को सधैंको पहिरन उस्का अरु दौँतरी भन्दा निक्कै सामान्य अनि आकर्षक । हिड्दा खेरी बुत्रुक-बुत्रुक हल्लिने गर्थे उस्का ती दुई स्तन। जब उ घरबाट बाहिर निस्कन्थी, मान्छेहरू सपै आफ्नो कामधन्दा छोडेर उसैलाई हेर्दथे। नहेरुन पनि किन? उ हेरु हेरु खाल्की थि। हिड्दा खेरी उस्का ती स्तनले बाहिर आउलाझै गर्दथ्यो। एउटा समिज अनि तेस भित्र ब्रा लगाउँदा नि उस्लाई आफ्नो ती दुई स्तन समहाल्न गार्‍हो अनि हम्मेहम्मे पर्दथ्यो। उस्ले लगाएका लुगा च्यातेरै बाहिर निस्कन खोज्दथे उस्का ती गोलाकार स्तन मान्छेहरुको मन शान्त हुन्थ्यो उस्को यस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिलाई नियालेर हेर्न पाउँदा। उस्का दौँतरीहरुले नि भन्ने गर्थे “ओई, तेरो यो दुईवटा पोका त कत्ति ठूलो हो के ? आम्माम्मा भनेर...उ रिसाएनी लजाएनी केही नबोली जान्थी ! बाध्यथी उ सपैको यस्तो कुदृष्टी अनि बोलाई बाट ।
मान्छेहरु उस्का ती दुई स्तन छुन चाहन्थे। उ माथी आफ्नो खुट्टा चढाउन चाहन्थे। उ संग रमाइलो गर्न चाहन्थे। कतिको त तेस्तो फगत प्रयास समेत बिफल नभएको पनि हैन, तर उनीहरु सपैजना एउटा राम्रो दाउ कुरेर बसेका थिए। उ कसै संग बोल्दिनथि खासै। कारण उहीँ हो, उस्का ती दुई स्तन कहिलेकाही सिमराबाट बिरगंज जाँदा सिटिराईड मा सिट नपाएर उभिदैँ यात्रा गरेको बेला उ जता उभिन्थी, दाँत झर्नलागेका, झरेका, भर्खरै दुधे दाँत झर्न थालेका स-साना भाईहरु, जवानी र बैँसले उनमात भएर ज्यानमा मिठो अनि सुगँधित बास्नादार अत्तर छरेर चढेका युवाहरु, बिहे गर्ने उमेर भएका केटाहरु ,उस्कै उमेर बराबरका छोरीहरु भएकाहरु सपै जना उस्कै छेउ अनि वरिपरि उभिन्थे उस्लाई अनि उस्का ती झुन्डेका दुई स्तनलाई छुनकै लागि । अन्तयमा सपैले उस्लाई “ओह,सरि” भनेर आफ्नो बाटो लाग्दथे ।
उस्लाई यस्तो कुरा सहने बानी भईसकेको थियो। तर रहर ले हैन,करले। उस्ले झगडा,प्रतिवाद गर्न जान्दिन थि। उ यत्ति सम्म अबुझ थि कि उ आफ्नो साथिको घर जाँदा उस्को साथिको बाबाले आफ्नी छोरी कतै गएको मौका पारी उस्लाई “मलाई हात हेर्न आउँछ नि नानी खै म तिम्रो हात हेर्दिन्छु भन्दै उस्को हात सुम्सुमाउँदा, तिमी त कत्ति भाग्यमानी नानी तिम्रो त घाटिमा नि कालो कोठी रैछ भन्दै घाटिमा हातले स्पर्श गर्दा, लौ तिम्रो त ओठको तल नि कालो कोठी रहेछ भन्दै उस्को ती गुलाबि ओठ, जस्मा कुनै लाली समेत लगाएकी हुदिन उस्ले, त्यहाँ छुँदा, कत्ति लामो अनि मिलेको सिल्की परेको कपाल भन्दै उस्को कपाल हटाउदै उस्को गर्दन मुसार्दा समेत उ चुपचाप सहन्थी। कसैलाई केही भन्न सक्दिन थि। उस्ले भन्नेपनि कस्लाई ? उ यसरी नै सधैं यौनदुर्व्यवहारमा परिरहन्थी अनि सहिरहन्थी। उस्लाई यस्तो यौनदुर्व्यवहार हो भन्ने कुराको समेत ज्ञान थिएन। अब होस पनि कसरी जबकी यो सप उस्लाई उस्को आफ्नै बाबाको उमेरको साथिको बाबाले गर्दा। उस्ले आफ्नै बाबाको झै नजरले अबोध पाराले नाता लगाएकी थि, तर यस्को गलत फाईदा उठाईदिन्थे मान्छेले।
उ स्कुलबाट घर आउँदा उ आउनेजाने बाटो मा उस्को लागि सधैं नै केटाहरूले कहिले जिब्रो पटकाएर, कहिले उस्लाई हेर्दै थुक निलेर, कहिले अनैतिक अनि अश्लील हर्कत गरेर उस्को स्वागत गर्ने गर्दथे। उ लाचार थि। असाह्य थि। उ निर्बल थि। उ विवश थि। उ डरपोक थि। उ सोझी थि। उ बोल्न सक्ने पढेलेखेकी मूर्ख थि। उस्लाई समाजको डर थियो। उस्लाई आफ्नो बाबाको ईज्जत्को बेपनाह चिन्ता थियो। उस्लाई आफ्नो भाईको माया थियो। उस्लाई आफ्नी स्वर्गीय आमाको सम्झना थियो,तर यो समाजले उस्को भावनाको कहिले परवाह गरेन। यो समाजको कुनै केटाहरूले उस्लाई आफ्नै दिदीबहिनी सरह सम्झेर मानेन। उस्लाई यो समाजको उमेरमा उस्कै बाबाको हाराहारी भएकाहरुले समेत उस्लाई पनि आफ्नै छोरी झै को दर्जामा राखेर सोचेन।
उ अब भित्र-भित्रै पाकेर गुम्सिन थाली। एकलै ढोका थुनेर सुक्क-सुक्क रुन थाली। उस्ले जानेकै रुन मात्रै थि। उस्लाई आफ्नो सुन्दरता माथी घृणा लाग्न थाल्यो जबकी यो समाजमा रहेका हरेक पुरुषहरुलाई उस्को त्यो सुन्दरता ले मोहनी लगाएको थियो। जबकी उस्लाई देखेर यो समाजका दाँत झरेका बृद्धले समेत आफ्नो जवानी ताजा गर्दथे।
उ माथी सबैको नजर थियो। उ माथी सबैको गिद्धे नजर थियो। उ माथी सबैको कुनियत थियो। उ माथी सबैको आँखा गडेको थियो। उस्को स्तन माथी सबैको ध्यान थियो। सबैको स्तन प्रेम थियो।
उस्ले आफ्नो सेतो अनि गोरो छाला अनि चिल्ला तिघ्रा देखाउँदै कहिले छोटो पहिरन लगाईन। उस्ले कहिले आफ्नो त्यो दुई स्तन रहेको स्थान हवांगै गरेर हिडिन। उस्ले आफ्नो शरीरमा कहिलेपनी कुनै किसिमको खुसबुदार सेन्ट छर्किदै मगमग बास्ना आउनेगरि हिडिन,तर पनि उस्लाई मान्छेहरुले उ हिड्ने गल्लि,बाटो,कुनाकन्तरा जताततै पछ्याउन्थे। उस्लाई हेर्दै बिग्रेका केटाहरूले “क्या मस्त-मस्त आईटम छ यार” भन्न कहिलेपनी छाडेनन् । “यस्लाई गर्न पाए त यार?” नभन्ने कोहि थिएनन् ।
एकदिन उ घरमा एक्लै थि, दाउ कुरेर बस्नेहरुका लागि यति भएपछी पुगिहाल्यो। ४/५ जना केटाहरुको हुल उस्को घरमा प्रवेश गरे। जबर्जस्ती उस्को कोठामा प्रवेश गरे। जबर्जस्ती उस्को हात समाए।जबर्जस्ती उस्को मर्जी बेगर उस्को स्तनमाथी हात लगे,यत्तिकै मा उस्को बाबा पुगे। तरबार झिके ती दुष्टहरुलाई काट्नको लागि। केटाहरू सपैजना भागे। उ रुन थाली। उ यस्तो घटनाले चिच्याउन थाली। उ एक्लै बर्बराउन थाली। उ एक्लै कुना पसेर आफैंमा हराउन थाली,कारण उस्को ती दुई स्तन।
उ जिउँदो लास बनेर बाचिरहेकी थि। यो सप उस्को बाबालाई असह्य भयो। आफ्नो छोरीको ईज्जत् माथी हात हालेको आफ्नै आँखाके देखेका उस्को बाबालाई आफ्नो छोरीको यस्तो हालत देख्दा हृदयघात आयो ।
जसोतसो छिमेकीहरुले उस्को बाबालाई हस्पिटल लगे। उ अझै बेहोसिमै थि।उस्लाई यो दुनियाँ संग त्यो घटना घटे देखि न त केही लिनु थियो,न त केही दिनु नै थियो। यो संसारमा उस्को कोहि रहेनछ सिवाय उस्को जन्मदिने बाबा र सानो भाई बाहेक।सायद उस्ले यस्तै सोचिरहेकी थि। नसोच्नु पनि किन? आखिर उ माथी सबै पुरुष फुलमाथी रस चुस्न भमरा घुमेझै घुमिरहेका थिए।
हस्पिटल बाट उस्को बाबा घर आउनुभयो। तर पनि आफ्नो छोरीको हालत जस्ताको तेस्तै पाउँदा मन कतही पनि खुसी थिएन।खुसी हुनुपनी कसरी? आफ्नो फुल झै छोरीमाथी कसैले चढ्न खोजेको आफ्नै आँखाले देखेपछि । समय बित्दै गयो। अब बिस्तारै-बिस्तारै उ पनि त्यो घटनाबाट तङ्र्ग्रीदै बाहिर आउन लागि। फेरि बिस्तारै-बिस्तारै उ हाँस्न थाली।बिस्तारै-बिस्तारै उ स्कुल जान थाली। बिस्तारै-बिस्तारै उ खाना पकाउने हुन थाली। उस्को भाईले आफ्नो दिदिलाई के भाको थियो भनेर थाहापाउन सकेको थिएन। उस्को दिमाख कलिलै थियो। सोच्न सक्ने क्षमता सानै थियो। अबोध थियो।
बिस्तारै-बिस्तारै फेरि ती यी समाजका पुरुषहरूको मरेका पुरुषार्थ जाग्न थाल्यो। सुतेका मर्दांगी उठ्न थाल्यो। ब्युझिन थाल्यो । उ प्रतिको हेराईमा पहिलेझै बाक्लिन थाल्यो।अब उस्को बाबालाई ठाउँ सरेर अन्त जाउँ भने छोरीको पढाई बिग्रेला, SLC दिन नपाउलि भन्ने डर थियो।तेसैले छोरीको SLC पछि काठमाडौं जाने सोच बनाए। उस्ले टेस्ट दि। टेस्टमा समेत उ जिल्ला प्रथम हुने गरि अब्बल निक्ली।
उ रातको समयमा घरबाट बाहिर एक्लै कहिले निस्केर जाने वातावरण समेत बनेन। कस्तो विडम्बना, उस्लाई आफ्नो ईज्जत् लुटिएला भनेर हर-हमेशा डरमै बाँचिरहेकी थि। बाँच्नुपरेको थियो।उ कहिले आफ्नो दौँतरीहरुको राती तिर हुने बर्थडे पार्टिमा जान सकिन। कारण उहीँ थियो,उस्का ती दुई स्तन। उस्को त्यो कामुक शरीर । उस्को त्यो लचकदार नागबेली हिँडाई।उस्को त्यो आकर्षक प्राकृतिक शारीरिक बनौट ।
उ यस्तो गुमसुम,चुपचाप अनि यस्तो दुर्ववहार किन सहन्छे त आखिर ? १बर्ष अगाडी जब उ ९ कक्षामा पढ्थी तब उ स्कुलबाट ट्युसन सहित पढेर जाँदा साझको ६:३०जस्तो बजेको थियो।
उस्लाई उ स्कुलबाट घर आउने-जाने बाटो ढुकेर बसेका काम नभएका आवारा अनि लफंगा तिघ्रे भत्ता खाने बिग्रेका गल्लिका केटाहरुले त्यो दिन यसो भन्दै जिस्काए जिब्रो पड्काउँदै -” हाय, हाय माल त क्या टाईट अनि कडक छ नि है,अर्कोले मुख मिठ्याउँदै भन्यो-“आम्म्मा यस्को त्यो दुईवटा दु… त क्या ठूलो अनि सेक्सी के ,
अर्को ले अझै थप्दै भन्नथाल्यो-“यस्को चक्का पनि क्या सहि छ हौं केटा हो,अर्को पनि के कम थियो र,तेस्ले नि बोलिहाल्यो-“यस्लाई गर्न पाए त…….। उस्ले एउटाको गाला चड्काउदै बोली-“के तिमीहरुको घरमा दिदिबहिनी छैन?सपै जना उस्को यस्तो कुरा सुनेर हाँस्दै बोले-“मैयाँ सपैजना छन तर तिमी छैनौं नि।उ फेरि बोली-“म तिमीहरूकै ती दिदिबहिनी जस्तै हो,किन यस्तो नराम्रो भन्छौ मलाई? उस्को यो प्रश्न भुइँमा झर्न समेत नपाई सपै एक्कै स्वरमा बोले-“कान्छी,तिमी हाम्रो बहिनी जस्तै हौ,तर बहिनी नै त हैनौँ नि?
उ फेरि कड्किदै बोली-“तिम्रो घरमा आमा छैनन् ? उहाँहरुको पनि के तिमीहरु यसरी नै बेईज्ज्त गर्छौ र हो? उता बाट फेरि यस्तो उत्तर आयो-“हो हाम्रा आमा छन्,हामले आमा को दूध पनि खाएका छौ, त्यसैले त तिम्रो नि त्यो दु….खान चाहन्छौ बच्चामा आफ्नो आमाको दूध तनतनी पिए झै……यत्ती भन्दै दुईजनाले उस्को हात समाउन थाले। तिनिहरुको नाईकेले चाहिँ आफ्नो हात उस्को ती दुई स्तनमा लगेर माडमुड गर्न थाल्यो। त्यतिकैमा उस्लाई नैतिक शिक्षा पढाउने सर आईपुगे। केटाहरूलाई मार बेसरी झपारे। सपैजना त्यहाँ बाट तेसपछी कुलेलाम ठोके। उ सुक्क-सुक्क रुन थाली। उस्लाई सरले समझाउँदै भन्नथाले-“हेर दुनियाँले तलाई जे जस्तो भनेपनी चुपचाप सुनेर पनि नसुनेझै गरेर हिंड्नु,कसैको मुख नलाग्नु,नत्र यी आजको जस्तै हाल हुनेछ।” उस्को सरले जे भनेपनी नसुनी हिंड्नु भन्नुको अर्थ सायद यदि उस्लाई कसैले -“माल,आईटम,पटाका,तोप लगायत जे जस्तो भनेपनी केही नबोल्नु” भन्ने सम्मको थियो होला। त्यसैले त्यसपछि आजसम्म उस्ले कसैलाई पनि एक बचन केही नबोलिकन सिद्धा-सिद्धा आफ्नो बाटो हिंड्ने गर्थी। उस्लाई कसैले माल त सहि छ,फिगर त आगो लाउने खाले छ,कस्तो हल्लेको हौँ यस्को त हेर्न केटाहो भनेको सुन्दा पनि उ सुई-सुई कुनै प्रतिवाद नगरिकन जान्थी।
फागुनको महिनारंगहरुको पर्व होली बसन्त उत्सवस्कुलमा राखिएको “होलि कार्यक्रम” मा समेत उ जान डराई। स्कुल नगईकनै घर बसि उ। कारण उहि थियो, उस्का ती दुई स्तन। होलिको बहाना पारी उसमाथि अनैतिक स्पर्श हुनेछ भन्ने उस्लाई थाहा थियो। त्यहीँ भएर उ स्कुल गईन त्यो दिन। जानुपनी कसरी ? गईसक्नु खालको उस्को लागि कुनै वातावरण नै थिएन।
होलिको दिन। उस्लाई रंग दल्न उस्का दौँतरीहरु घरै आए।किनकी उ घरबाट बाहिर होलि खेल्न गाकी थिन। कारण उहीँ थियो,उस्का ती दुई स्तन। सबैले छुन चाहेका,सबैले चुम्न चाहेका,सबैजना उस्का ती दुई स्तनका भोगी थिए। उस्लाई उस्का दौँतरीहरुले रातो रंग र अबिर दलेर हनुमान बनाईदिए। कस्ती राम्री देखिएको उ रंगहरुले गर्दा। उस्लाई टाडैबाट अरु भन्दा बिछिट्टै राम्री देखिन्थ्यो। बिस्तारै होलिको बहानामा उस्को स्कुलमा संगै पढ्ने केटाहरुपनी आए उस्लाई रंग दल्न।उ स्लाई रंग दल्नु त सिर्फ एक बहाना मात्रै थियो,तर रंग दल्ने बहाना भित्र उस्का ती दुई स्तन भित्र आफ्नो हात छिराउने असली चाहाना थियो। सबै केटाहरुले आफ्नो अनुहारमा नचिनिने गरेर सिलभर रंग ले पोतेका। बिस्तारै-बिस्तारै केटाहरुले उस्लाई रंग दल्ने बहानामा घेरे। उ सबैको बिचको गोलाकार भुमरीमा फसि। एकजना अघि बढ्यो,”happy holi को नारा घन्काउँदै। उस्ले मदिरा पिएको थियो। केटाहरुलाई त्यो बोत्तलको मदिराले भन्दा उस्को जवानीको प्यालामा भरिएको कामुक शरीरले बढ्ता नसा लागेको थियो। बिस्तारै उस्को ती दुई स्तन माथि फेरि एकपटक होलिको बहानामा आफ्नो असली चाहना पूरा गर्नको लागि स्पर्श गर्न थाल्यो ।
उ जोड्ले धकेल्दै त्यो केटालाई लडाएर माथी आफ्नो कोठामा गई, ढोका थुनी,आफ्नो सारा लगाएको लुगा खोली,ऐना अगाडी उभि,आफ्नो एउटा हातले स्तन समाउँदै ऐना अगाडी रुदैँ यस्तो प्रश्न गर्न थाली-“आखिर के छ मेरो यो दुई स्तनमा तेस्तो? सारा पुरुषहरु छुन खोज्दछन्,आखिर के छ र मेरो शरीरमा तेस्तो? जस्ले गर्दा सारा पुरुष जातिको मलाई देख्ना साथ उनीहरुको सुतेको पुरुषार्थ पनि जागेर आउँद छ ? आखिर सबैको नजर किन यस्तो? किन मलाई यो समाजको कसैले पनि दिदिबहिनी अनि छोरीबेटि मान्न चाहदैनन् त? उस्को यस्ता प्रश्नहरु त्यो ऐनामा ठोकिएर फेरि उसैलाई फिर्ता आयो। आएन त केवल उस्का ती कुनैपनी प्रश्नहरुका उत्तर । उस्ले यति सानो कुरापनी बुझिन कि-“यो संसारमा राम्रोसंग फुलेर फक्रेको सुगन्धित फुलमाथी मात्रै सबैको नजर हुन्छ, मानव देखि लिएर जनावर सम्म। किरा फटयांग्रो सम्म। उस्ले किन बुझिन कि -“यहाँ बांगो रुख हैन,सिद्धा रुख पहिले काटिन्छ भनेर ?
दिनहरु पनि बित्दै गए। उस्को SLC पनि आयो। उ स्कोSLC पनि राम्रोसँग गयो। उस्को बाबाले अब यहाँ नबस्ने भनेर काठमाडौं तिर घर पनि किने। सिमराको घर बिक्री भयो तर असारपछि घर छाड्ने गरि। अर्थात असारसम्म सिमरामै बस्न सक्ने गरि।
बैशाख १ गते नयाँ बर्ष नयाँ महिना नयाँ खुसी नयाँ सुरुवात रुख बिरुवामा पुराना पात पतिंगर हरु मरेर नयाँ मुना पलाउदै सुरु हुँदै थियो। टनट्लापुर मध्य घाममा पनि सररर चिसो-चिसो हावा चल्थ्यो। बाटो हिंड्ने बटुवाहरु बरपिपलको चिसो छहारीमा बसेर एक्कैछिन बात मारेर आ-आफ्नो गन्तव्य तिर लाग्थे। उस्को कहिले पनि हिम्मत आएन कि त्यो घर छेउकै चौतारीमा गएर चिसो प्राकृतिक हावा खाने। गर्मी महिना आएतापनी उस्लाई जहिले शरीर ढाक्ने लुगा लगाउनुपर्ने बाध्यता । कारण उहीँ उस्को ती दुई स्तन।कारण उहीँ उस्को सेतो र गोरो रंगको छाला भएको शरीर ।कारण उहीँ उसमाथि दुनियाँ पुरुषको गिद्धे नजर।
उ घर छेउकै सानो अनि चलेको राम्रो होटेलमा Receptionist को काममा जान लागि। घर छेउकै छिमेकी अंकलको होटेल भएर उ जान तयार भई। उस्ले SLC को रिजल्ट नआउन्जेल सम्म काम गरेर बिजि हुनु पनि ठिकै होला भनेर सोची होलि। उस्लाई त्यहाँ काम गर्न भनेर त्यहीँ अंकल ले प्रस्ताव लगेका थिए। उस्को पाईला त्यो होटेलमा जुन दिनबाट पर्न थाल्यो, होटेलमा ग्राहकहरु को भिड बढ्दै गयो।होटेलवाला अंकल अचम्मित भए,किनकि यस्तो भिड होटेलमा कहिले भाको थिएन। कारण थियो उस्को त्यो दुई स्तन।
होटेलमा नानाथरीका ग्राहकहरु आउनथाले। होटेलमा जाँडरक्सी खानेको घुईचो लाग्न थाल्यो उस्लाई अनि उस्को त्यो दुई स्तनलाई हेर्न। उ हतार-हतार कामले कतै दौडिदा उस्का ती हल्लिएका दुई स्तन हेरेर ग्राहकहरु बियर पिउँदै मुला र काक्रा टोक्ने गर्दथे मुख मिठ्याउँदै। उस्ले यो कुरा चालै पाईन कि होटेलमा यत्रो धेरै ग्राहकहरु सिर्फ उसैलाई अनि उस्का ती दुई स्तनलाई हेर्न भनेर अनि दाउ पाए मौकामा छक्का नि हान्ने आशाले आएका हुन भनेर। उ सोझी थि।दायाँबायाँ अनि छलकपट कुरा गर्न जान्दिन थि।
एकदिन होटेलमा त्यो अंकल नभएको मौका पारेर होटेल साहुको जेठो छोरोले उस्को ईज्जत्को लिलामी गर्ने भरपुर गुरुयोजना तयार गर्यो। उस्लाई यो सपको पता अनि कुनै खबर थिएन। उस्लाई होटेलको ३०२ नम्बरको कोठामा ग्राहकको अर्डर लिन पठाईयो। यो काम उस्को थिएन।वेटरलाई त्यसदिन अन्तै पठाईएको थियो अनि ढिला गरि आउनु भनेर अर्‍हाईएको थियो। उ कोठामा गई-“सर के छ हजुरक अर्डर भन्दै। कोठामा बसेको ग्राहक उठेर चुकुल लगाउँदै भन्न थाल्दछ-“मेरो अर्डर त आईसक्यो,अर्थात मेरो अर्डर त तिमी पो हौ त कान्छी।”
बिस्तारै पुनः एकपटक उस्का ती दुई स्तन माथी हमला हुन्छ। उ त्यो मान्छेलाई टोकेर आफ्नो लाज बचाउँदै भाग्दछे। उ भाग्न सफल हुन्छे। दायाँबायाँ कतै नगईकन उ आफ्नो घर जान्छे। फेरि पनि उस्लाई आजको उस्को ती दुई स्तनले गर्दा ईज्जत् माथी दाग लाग्न खोजेको थियो।
उ काममा जान छाडी। कारण उहीँ थियो,उस्का ती दुई स्तन। उस्लाई अब बाँच्न मन लागेन। कारण उहीँ थियो,उस्को ती दुई स्तन। उस्लाई यो संसार जिउँदै नर्क लाग्न थाल्यो। कारण उहीँ थियो,उस्का ती दुई स्तन। उ माथी बारम्बार विभिन्न बहानामा हिंसा हुन्थ्यो सधैं जसो। उ चुपचाप सहन्थी। अरुले उसमाथि उस्को मर्जिबेगर छुनु आदतै जस्तो भईसकेको थियो, अनि चुपचाप सहनु उस्को आदत बनेको थियो।
दिनहरू बित्दै गए। असार १ गते। उस्को जन्मदिन। बिहानै बाट आकाशले आफ्नो सधैं झै को रुपरंग बिगार्दै गईरहेको थियो।घरी पानी पर्ने,घरी टन्टलापुर घाम लाग्ने। आकाशले पनि आज केही अनिष्ट हुनेछ भनेर मौन संकेत दिएझै लाग्दथियो।उ भाई संग मन्दिर जान तयार हुँदा पानी रोकिन्छ। छाता नलिकन भाई संग मन्दिर जान्छे। मन्दिर दर्शन गर्न आएका सपै उसैलाई ट्वाल्ल पर्दै हेर्दै बस्न थाले। कारण थियो उस्का ती दुई स्तन। उ हतार-हतार पुजा सकेर घर फर्किनै लाग्दा पानी पर्न थाल्यो। उस्लाई घर जान हतार थियो। उ पानीमै भिजेर भएपनी घर जाने बिचार गर्दै थि। उ पानीमै रुझ्दै घर जान मन्दिरबाट तल झरी ।पानी झनै जोड-जोड्ले दर्किन थाल्यो। उस्ले लगाएकी सेतो कुर्ता भित्रको रातो ब्रा प्रष्टै संग देखिन्थ्यो । सपैले उस्लाई हेर्न थाले बाटोमा हिंनिरहेको बेला। कोई बोल्यो-“ओई हेर्न तेस्ले त क्या दामी सेक्सी रातो ब्रा लाकी रैछे”। अर्को ले थप्यो-“ब्रा मात्रै हैन,राम्रोसँग हेरत,तेस्को त ब्रा भित्रैबाट पनि दुधको मुन्टा देखिराको छ।”
घर पुगेर उ आफ्नो बाबालाई फुल-प्रसाद दिदैँ आशीर्वाद थापेर खाना पकाउन लागि। दिन तेस्सै बित्यो। बाबालाई मुटुको औषधि दिने बेला उस्ले देखि कि बिहान ६ नबज्दै खानुपर्ने औषधि त्यहीँ एउटा गोलि मात्रै थियो भनेर।
उ रातिको ८ बजे तिर बाबाको त्यो औषधिको खोल लिएर मेडिकल गई औषधि लिन भनेर। औषधि किनेर फर्किने क्रममा उस्लाई कसैले गाडीबाट ओर्लेर नाकमा बेहोसीको लिक्विड सुंघाउदै बेहोस बनाएर गाडीमा हालेर लगे।
गाडी सिमराको आलिशान अनि सपैभन्दा मंहगो होटेलको कम्पाउण्ड भित्र प्रवेश गर्यो। उस्लाई त्यो होटेलको सपै भन्दा मंहगो कोठामा लगियो।
उ होसमा आईसकेकी थिन अझै। ढोका लक गरेर ३ जना केटाहरू तल काउण्टर तिर झरे केही कुराको अर्डर गर्न भनेर। दुईजना काउण्टरमा अर्डर गर्न व्यस्त थिए भने एकजनाले कसैलाई फोन गर्दै काम सफल भयो अब आउँदा हुन्छ भनेर फोन राख्यो। उनिहरुले अर्डर गरेको सामानहरु बियर का बोत्तलहरु आयो। सपैजनाले आफ्नो दुईवटै हातमा बियर लिएर माथी त्यहीँ कोठामा गए।
केही समयपछि त्यो कोठामा दुईजना मान्छे पसे। एउटा तेस्तै २६-२७ बर्ष जत्तिको हुँदो हो, अर्को चाहिँ ४०-४५ बर्षको सिनसियर जस्तो देखिने। त्यो कोठाको ढोका ईलेकट्रीक लक सिस्टमको थियो, जस्लाई खोल्नको लागि एउटा कार्ड हुन्छ जस्मा त्यो मान्छेको फिंगरप्रीन्ट हानेपछी त्यो ढोकाको लक हुने ठाउँमा देखाउँदा मात्रै ढोका खुल्ने र बन्द हुने गर्दथियो। कोठा पनि साउण्ड प्रुफ थियो,अर्थात बाहिर बाट बोलेको चाहिँ सप्पै सुनिने तर भित्र जत्तिनै चिच्याउँदै कराएपनी नसुनिने।
उ अझैसम्म बेहोसी मै थि। बिस्तारै-बिस्तारै उस्को हात हल्लिन थाल्यो। आँखा खुल्न थाल्यो। खुट्टा चल्न थाल्यो। जब उ पुर्ण होसमा आई, आफुँलाई त्यस्तो अवस्था अनि त्यो वातावरणमा पाउँदा आत्तिदै उठेर ढोका खोल्दै भाग्न ढोका भएतिर गई । तर ढोका उस्ले जत्तिनै प्रयत्न गरेतापनी खुल्ने खाले थिएन। उ जोड्ले रुदैँ हारगुहार माग्न थाली,तर कोठा को आवाज बाहिर गए पो कसैले सुन्थे होलान। उस्को यस्तो अवस्था देखेर सपैजना हाँस्न थाले उ माथी।
एउटाले उस्लाई बोकेर बेडमा लडायो। अर्कोले च्याप्पै हात समायो। तर जब त्यहाँ मध्ये उस्को नजर उस्लाई नैतिक शिक्षा पढाउने सर माथी गयो तब उ अचम्मा परि। उस्ले रुदैँ भनी सर,मलाई बचाउँनुस्न? सरले हाँस्दै बोले-“जहाँ तलाई मैले नै लियाए, अब मै चाहिँ तलाई कसरी बचाउँन सक्छु र? उ बलिन्धार आँसु झार्दै रोईरही।उस्ले सरलाई भनी,”सर तपाईलाई अझैसम्म याद छ होलानी जब मैले स्कुलमा भएको “पुरुष” नामक निबन्धमा भाग लिदाँ यस्तो लेखेको थिए-
तिमी कदापी मर्द हुन सक्दैनौ कुनै एउटि लाचार, विवश अनि बाध्यताले पुरिएकि नारी सँग रातमा आफ्नो बिच्छ्यौना तताउनको लागि उसलाई अनि उसको अस्मितालाई आफ्नो भोग विलाशको लागि प्रयोग गर्दछौ भने ।
धिक्कार छ तिम्रो मर्दागिंमा,सक्छौ भने नारीको मनमा बास गर,सक्दैनौ भने नारीको शरीर संग पनि नखेल ।।
सच्चा पुरुष त त्यो हो जस्ले नारीको अपमान हैन सम्मान गर्न जानेको हुन्छ,नारीको ईज्जत गर्न जानेको हुन्छ,हरेक नारीको अस्मिताको रक्षा गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठानेको हुन्छ ।
मायाको नाममा एउटि बिबस केटिको शरीरको तल्लो भागको एउटा अंगमा हुने कथित भर्जिन किन टोड्नचाहन्छौ?सक्छौ भने उस्को मन भित्र तिमी र तिम्रो माया प्रती भएको डर, त्रास, अविस्वास र घृणाले बाँस गरेको नराम्रो कुरा हरुको भर्जिन तोड न ? किन मायाको नाममा कुनै पनि केटिले सधैंनै आफ्नो इज्जत र कुमारित्व गुमाउनुपर्छ ?? कसैले जबर्जस्ति गरेको लाई बलात्कारको संज्ञ्या दिईन्छ, तर कसैलाई फकाई-फुलाई उस्को अस्तित्व संग मायाको नकाब लाएर शरीरभरिको लुगा उतारेर गरिने घृणित कार्यलाई किन मायाको नाम दिन्छन् र यहाँ मायाको नाममा एउटी विबस केटिको हासिं-हासिं चिरहरण हुन्छ।याद गरम,यदि उता तिमिले मायाको नाममा कुनै केटिलाई आफ्नो यौन-प्यासकोलागि उस्को कुमारित्त्वको अस्तित्व मेटाउदै छौ भने यता तिम्रो दिदिबहिनी अनि छोरीमाथि नि कोई बुई चढ्दै हुनेछ।
आफ्नो दिदिबहिनी अनि छोरीलाई चाई संसारकै राम्रो चरित्र भएकी र पवित्र केटि देख्ने,अनि दुनियाँ कि दिदिबहिनी र छोरीबेटिलाई चाई माल, भालु, आईटम, पटाका, अनि चरीत्रहिन भन्दै हिंड्ने?
कृपया सोच बदल्नुस्,कुनै पनि केटिहरु खेलौना हैनन्, जो संग जति बेला मन लागो खेल्यो अनि मन मरेछी फ्याकिदियो अथवा अर्को खेलौना किन्यो। त्यसैले तिमि आफ्नो दिदीबहिनी र छोरीको नि ईज्जत् बचेको,रहेको हेर्न चाहन्छौ भने तिमिले पनि अरुको दिदिबहिनी र छोरीबेटिको इज्जत संग नि खेलवाड गर्न भएन” भनेर? हजुर आफैं त्यो निर्णायक मंडलमा हुनुहुन्थ्यो । हजुरले नै मेरो यो निबन्धलाई प्रथम बनाउनु भएको थियो। आज हजुरले नै यस्तो गर्न खोज्ने? यत्ति सुनेर उस्लाइ नैतिक शिक्षा पढाउने सरले हाँस्दै भने-“तिमिलाई पनि मैले स्कुलमा पढाउने बेला भनेको एउटा कुरा अझैसम्म याद होला नि कि-“हात्तीको खाने दाँत र देखाउने दाँत अलगअलग हुन्छन भनेर”
उ गुवा-गुवा रोई रहि। फेरि उस्ले सरलाई बिलौना गर्दै भन्नथालि कि -“सर म पनि तपाईकै छोरी जस्तै हो,झन तपाईकै छोरी संगै एउटै क्लास,एउटै बेन्चमा बसेर पढ्छु।के हजुरलाई म माथी आफ्नै छोरीको जस्तो माया आउँदैन?सर फेरि बोले-“त मेरो छोरी जस्तै होस्, तर मेरो आफ्नै छोरी त हैनस नि? अनि यो मेरो मुख्य धन्दा हो अनि पढाउने काम चाहिँ समय बिताउने माध्यम मात्रै हो। पढाएर कत्तिनै पैसा पाउँछु र मैले जत्ति यो काम अनि धन्दा गरेबापत एक्कै चोटि लाखौं कमाउँछु।”
बिस्तारै अब उस्का ती दुई हात झन्झन् जोड्ले कस्सेर समाउन थाल्यो एकजनाले। अर्कोले उस्को कुर्था खोल्न थाल्यो। उस्ले भित्र लगाएकी ब्रा खोल्दै एउटा नरपिचासुले नाकमा लगेर सुंघ्दै -“आह्ह्हा क्या बास्ना छ” भनेर भन्न थाल्यो। अर्कोले उस्को तलको सुरुवाल खोल्यो। नाईकेले अब उस्को जिउंमा रहेको पेण्टी खोलेर सुंघ्दै बोल्यो-“यस्को त पेण्टि समेत यस्तो खुस्बुदार रैछ केटा हो,ला तिमिहरुपनी मजा लुट भन्दै दियो। उस्को शरीर अब सर्वाङ्ग नांगो भयो। सपैले अब आफ्नो-आफ्नो लुगा खोले। एउटाले उस्को ती दुई हात जोड्ले समात्दै आफ्नो लिंग उस्को मुखमा जबर्जस्ती कोचेर भित्र बाहिर गर्न थाल्यो। दुईजनाले उस्को ती दुई स्तन एक एक गरेर माड्मुड गर्दै निप्प्ल चुस्दै टोक्न थाले। उस्को सरले उस्लाई आफ्नो ज्यान माथी सुताउदै आफ्नो लिंग उस्को पछाडी पट्टि अवस्थित मलद्वार भित्र छिराउँदै भित्र बाहिर गर्न थाले। नाईकेले उस्को योनि लाई चुमिसकेपछी आफ्नो लिंग उस्को योनि भित्र सकिनसकी जबर्जस्ती पसाउन थाल्यो।
उस्लाई असह्य पीडा भयो। उस्लाई यत्ति पीडा भयो कि उ आफ्नो तेस्तो नर्किय पिडामा समेत आज एक शव्द ननिकाली चुपचाप सहिरहेकी थि। चिच्याएपनी कुन कुन पिडाको लागि चिच्याओस् त अब उस्ले? पीडा एक भएपो हुन्थ्यो।पिडापनी यस्तो थियो कि उस्लाई चारैतिरबाट पीडा भएर उ कराउन ,रुन,अनि चिच्याउन समेत सकिन। पिडाले हात छटपट्याउन खोजी भने उस्को हात जोड्ले समातिएको थियो। पिडाले जोड्ले कराउनु परेको भए उस्को मुखमा ती सैतान, दानवले आफ्नो लिंग उस्को मुखभित्र हुलेको थियो। पिडाले आफ्नो ती दुई स्तन हेर्न खोज्ने भए उस्को ती दुई स्तनलाई पनि दुई दानवले लुछिरहेका थिए। आफ्नो योनि र मलद्वार भित्र ती हवस् का पुजारिले आफ्नो लिंग छिराएको पिडाले कराउ भने सुन्ने कोहि थिएन। सपै तिर बाट उस्ले संतुलित पीडा पाई।उस्को पीडा ब्यालेन्स भईरहेको थियो।
यसरी नै रातभरि ती पापिले उस्को त्यो शरीरभरि पालैपालो सुते। पालैपालो भाग लगाउँदै ठाउँ परिवर्तन गर्दै उस्को त्यो कलकलाउँदो यौवनको अस्मिता रातभरि लुटिरहे।
आज उस्को जन्मदिन ,तर आजकै दिन उस्को ईज्जत् , मानसम्मान,कुमारित्त्व,स्वाभिमान अनि लाजको मरन दिन।
उ पिडाले गर्दा बेहोस भई। तर पनि ती यौनपिपासु थाकेनन्। अह्ह थाक्दै थाकेनन्। रुक्दै रुकेनन्। तन्ना भरी उस्को शरीर बाट निस्केको रगतै रगत ले भिजेको थियो। उस्को योनि च्यातिएर रगतको धारा बगिरहेका थिए। उसको मलद्वार रातै भएर सुन्निदै फुलेको थियो। उस्को ती दुई पुटुस्स परेका पोषिला स्तन औलाएका थिए। उस्का ती दुई स्तनभरी दाँत गाडिएको निसान बसेको थियो। उस्को कान टोकिएको थियो,जस्ले गर्दा कान बाट रगत बग्दै थियो। उस्को नाकमाथी ती दानवले आफ्नो नाक रगड्डै रातो बनाएका थिए। उस्को घाटीमा चुमेर टोकिएका डामहरु प्रष्टै संग देखिन्थ्यो। उस्को ती हातगोडामा ती पापिहरुको औंलाको चिन्ह राम्रैसँग देखिन्थ्यो, किनकी उस्का ती हातगोडा कस्सेर पक्डिएका थिए।यो घटना हुनुको कारण थियो,त्यहीँ -“उस्का ती दुई स्तन।”
बिहान ४ बजेतिर झिसमिस उज्यालोमै उस्लाई सपै जना मिलेर उस्को घर बाहिर आँगनको कुनामा रहेको धारा तिर फालेर गए। बिहान ५ बजे तिर उस्को बाबा पुजा गर्नको लागि नुवाईधुवाई गर्न भन्दै जब धारामा जान्छन् तब आफ्नो छोरीलाई तेस्तो अर्धनग्न अवस्थामा पाउँछन् । छोरी कोठामै सुतेकी होलि भन्ने लागेको थियो हिजो सधा झै उस्को बाबालाई, किनकी उ हिजो राती बाबालाई औषधि खुवाएर औषधिको खोल लिएर सुत्न जान्छु भन्दै गएकी थि। उस्को कोठामा पछाडी पट्टि समेत ढोका थियो,जसबाट उ औषधि लिन भनेर कसैलाई नभनिकन मेडिकल गएकी थि। मौका कुरेर बसेकाले उस्लाई फेलापारे,त्यसपछि यस्तो भयो।
“छोरी,ए! छोरी ? के भयो तलाई यस्तो ? आँखा खोल्न ए छोरी? उस्को बाबाले यसरी चिच्याउँदै निर्दयी तरिकाले बलात्कृत आफ्नो छोरीलाई रुदैँ बोलाए। जुरुक्क बोकेर कोठामा लगेर अलिकति पानी छ्यापेपछी बल्ल उस्को हल्का आँखा खुल्यो। आँखा खुल्नासाथ आँखा बाट आँशुका धारा बग्न थाले। रगतका आँसु बग्न थाले। कारण उहीँ हो,उस्का ति दुई स्तन। उस्को शरीरभरि रगतै रगत लतपतिएको।यस्को कारण पनि उहीँ थियो,उस्का ती दुई स्तन। केही समयपछी उ बल्लतल्ल राम्रोसँग होस् मा आई। छोरालाई उठाएर उस्को छेउमा उस्लाई हेर्दै गर भनेर डा.लाई बोलाउन फोन गर्न गए उस्को बाबा। उस्ले भाईलाई एक गिलास तातो पानी ल्याईदेउ त बाबू भनेर पठाई। उस्को भाई तातोपानी लिन गयो । उ जुरुक्क उठि। सकिनसकी कुर्सी तानी। आफुँ सुत्ने बिछ्यौनामाथी राखी,नजिकै रहेको उस्को आफ्नो लुगाको थुप्रो बाट एउटा सल झिकी। पंखामा बाधिँ अनि तेस्मै झुन्डेर लट्की। उस्लाई आत्महत्या गराउने कारण उहीँ थियो,हिजो राती भएको उस्को ईज्जतको हत्या। उस्को जिन्दगीको कथा यति चाडैं नै अधुरो हुनेथिएन सायद त्यहाँका पात्रहरु धोकेवाज ननिस्केका भए।उस्को यो सपै घटनाको पछाडी एउटा मात्रै कारण थियो,उहीँ “उस्का ती दुई स्तन।”
पानी तातोपानी लिएर उस्को भाई अनि फोन गरि सकेर जब उस्को बाबा कोठामा प्रवेश गर्दछन्, तब झुण्डिएको अवस्थामा उस्लाई पाउँदछन्। दुवै जना छोरि र दिदी भन्दै उस्को झुण्डिएको अवस्थाको शरीर बिछ्यौनामा राख्दै आलाप बिलाप गर्न थाल्दछन्। उनीहरु दुवैजनाको हंसले ठाउँ छाडेको थियो। नछाडोस् पनि किन? आखिर सोच्दै नसोचेको तेस्तो घटना घटेको जो थियो ।
समयले बिहानको ७ बजेको संकेत गर्दैगर्दा बाहिर बाट केही छिमेकी ले बोलाए-“दाई,दाई,तपाईकी छोरी SLC मा नेपाल बोर्ड फर्स्ट भईछे,यी पत्रीकामा नाम र फोटो सहित छापेको छ “SLC मा नेपाल टप गर्ने यी अब्बल छात्रा” भन्दै। हामी एक्कैछिन पछि आउँछौ लड्डु खान,नानि र तपाईहरु सबैलाई बधाई छ।” यत्ति भन्दै ती छिमेकीहरु आँगन बाहिरै बाट भित्र समेत नछिरिकन आ-आफ्नो गन्तब्य तिर लागे।
उस्ले SLC मा नेपाल टप गर्नुको कारण उहीँ उस्को ती दुई स्तन थिएन यो पटक चाहिँ । तर उस्को मृत्युको कारण चाहिँ अवस्यनै उहीँ “उस्का ती दुई स्तन” थिए,जस्लाई यो समाजका हवस् का पुजारी हरुले लुछिलुछी दाग लगाउँदै उस्लाई यो संसारबाट अर्कै अन्जान संसारमा पठाए।
स्कुले जाँचमा त उ सर्वोत्कृष्ट भई सबैलाई जितेर, तर आफ्नो जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण परिक्षा मा चाहिँ उस्ले उतिर्ण अंकसमेत ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण हुन पुगि। कारण उहीँ थियो,”उस्का ती दुई स्तन।”
उस्को यस्तो मृत्युको कारण चाहिँ उहीँ ती पापिहरु थिए, तर त्यो पापीहरुले गर्दा उस्को मृत्युको कारण “उस्का ती दुई स्तन” नै बन्न पुग्यो।
के ठुला अनि पुटुस्स परेको स्तन हुनु उस्को गल्ती हो र?
लेखक : सम्यक चौलागाई